China FOTON H7 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Foton
Noho ny fahafaha-avo be amin'ny lafiny fanovana sy ny fahaiza-manaony, dia azo natao ho an'ny dia lavitra sy fitaterana an-tsambo. Ny fitaovana, ny powertrain, ny fanodinana ary ny famokarana dia natao ho an'ny lava velona.
Refy ankapobeny 7300 * 2230 * 3030 (misy A / C)
Fahaiza-mipetraka 21 + 1/23 + 1/25 + 1/28 + 1
Ny Foton H7 vaovao dia manambatra ny fampiasa avo lenta miaraka amin'ny fampiononana, ary ny kalitaon'ny feo miaraka amin'ny fiarovana azo antoka. Nantitranterina betsaka ny famolavolana ny aerodynamika sy ny mampiavaka azy amin'ny fitondrana fiara, fa indrindra ny fandanjana solika mahomby sy ny vidin'ny tsingerin'ny fiainana.
Powertrain tena tsara Miaraka amin'ny teknikan'ny herinaratra mandroso sy ny fahaizan'ny R&D matotra, ny bus Foton 7M dia manana rafitra powertrain tena tsara, misy ny fampitomboana ny fahombiazan'ny maotera sy ny fanjifana ambany.
Fampisehoana miavaka miavaka, indrindra amin'ny maripana ultralow, -40ºC;
Fihozongozona ambany, tabataba ambany kokoa ho an'ny fiara mitondra fiara ahazoana aina, 7% ambany noho ny vokatra mifaninana hafa;
Ny lanjany dia mahatratra 340kg fotsiny, 15% -60% maivana noho ny vokatra mifaninana hafa;
Ny famoahana isaky ny litatra dia manakaiky ny 33.2kW / L, 10-35% avo kokoa noho ny vokatra mifaninana hafa;
Torkia farafaharatsiny mahatratra 600NM, vita tsara amin'ny fiakarana mihanika.
Misy famenoana menaka mandritra ny androm-piainana
Fonenana vy miaraka amin'ny fanodinana manokana, henjana tsara ary tanjaka avo;
Fihenam-bidy farany miaraka amina rafitra matevina, fitaovana mahery vaika miaraka amina conditio fanosotra tsara kokoa;
Ny tabataba ambany sy ny fahombiazan'ny fampitana avo, miantoka ny fampiononana sy ny toekarena.
Miorina amin'ny teknikan'ny chassis kamiao Foton matotra, ny bus Foton dia nanao ny fanitsiana chassis mba hifanaraka tsara amin'ny rafitry ny bus:
Ny fahatokisana dia nitombo tamin'ny alàlan'ny 30% Widalis chassis, ny coefficient fiarovana tsy miovaova dia nampiroborobo fatratra Nahazoana fanekena malalaka amin'ny tsena manerantany.
Vaky kapila anoloana & volo amponga aoriana
Fahombiazan'ny fanaparitahana hafanana tsara, fanatsarana ny fahamarinan-toerana sy ny fahombiazan'ny fanamafisam-peo amin'ny rafitra fanamafisam-peo Tsotra sy ny fihenan'ny toetr'andro ary ny famerenana amin'ny laoniny Ny freins azo antoka miaraka amin'ny fiarovana avo lenta, ny fanjifana angovo ambany, ny fiainana maharitra
Rafitra fampitandremana momba ny fiaingan'ny lalana (LDWS) Rafitra izay mampitandrina ny mpamily rehefa manomboka miainga tsy fanahy iniana ny fiara